मुनको कमाण्डर क. प्रचण्ड: ‘ख्रिष्टियन बिद्रोह देखि दुल्लु बिद्रोह सम्म’ | Makalukhabar.com
मुनको कमाण्डर क. प्रचण्ड: ‘ख्रिष्टियन बिद्रोह देखि दुल्लु बिद्रोह सम्म’
अहिले मुनको रक्सी सेवन काण्डमा नेता माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली नेपाली जनताको अगाडि सर्वाङ्ग नाङ्गो हुन पुगे तर, नेपालमा इसाईकरणको मुख्य योजनाकारको कमान्डर जो नाङ्गिन पर्थ्यो ती चाहिँ बाहिर नै थिए नाङ्गिन पाएनन् ।
अमेरिकाको एउटा गैरसरकारी संस्था ‘USD’ ले सन् २००३ मा माओवादी जनयुद्ध सम्बन्धि गोप्य रूपमा एउटा बिस्तृत प्रतिबेदन तयार गरि नेपालमा माओवादी जनयुद्धको अनुसन्धान गरि पठाएको रिपोर्टमा ३ वटा कारण उल्लेख गरेको थियो ।
ती तीन कारण मध्ये एउटा कारण ख्रिष्टियन बिद्रोह सँग जोडिएको थियो ।
इतिहास अलिकता पुरानै थियो । पूर्वी रुकुमको एउटा केन्द्र थियो तकसेरा । विक्रम संवत् २०२५ सालमा नेपाल सरकारको अनुमति लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय मार्फत् समर इन्स्टिच्युट अफ लिङ्ग्विस्टिक्स (सिल) ले नेपालका भाषा र भाषिकाहरुको वर्गीकरण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । भाषाको आवरण दिए पनि यो संस्था आदिवासी भाषाहरुमा बाइबललाई अनुवाद गर्ने एउटा मिसनरी संस्था थियो ।
सिलका परियोजना निर्देशक डा. डेभिड वाटर्स मुस्ताङको जोमसोम हुँदै तकसेरा र पूर्वी रुकुमका अन्य गाविसहरुमा पुगे । त्यहाँ उनले खाम मगर भाषाको अध्ययन मात्रै गरेनन्, उनी र उनको परिवार त्यहीँ घर बनाएरै बस्न थाले । डा. वाटर्सले बाइबललाई खाम भाषामा अनुवाद गरे । यसैबीच सरकारसँग सम्झौताको अवधि सकियो र वाटर्स परिवारले तकसेरा छाडे । उनले गाउँ छाडे पनि उनले त्यहाँ बसुन्जेलमा थुप्रै खाम मगरहरु ख्रिष्टियन बनाई सकेको थिए ।
गाउँलेले प्रहरीलाई समाएर जुँगा उखेल्ने, कालोमोसो दल्ने बर्दी च्यातेर पिटपाट गरेर गाउँ घुमाए । र, यसै घटनालाई प्रतिबेदनमा ख्रिष्टियन बिद्रोह भनेर ‘USD’ ले उल्लेख गरेको हो । यिनै ख्रिष्टियन बिद्रोह र माओवादी बिद्रोहको साँठगाँठबाट जन्मन पुग्यो दुल्लु बिद्रोह ।
विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्यमा धर्म परिवर्तन गैरकानुनी थियो । जिल्लाको नयाँ सदरमुकाम मुसिकोटमा यो खबर पुग्यो । पूर्वी रुकुमका मगरहरुमा धर्म परिवर्तन व्यापक रहेको खबर पाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुसन्धानका लागि प्रहरी पठाए । स्थानीय ख्रिष्टियन नेताहरुलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिइयो । नौ जनाले आफूले धर्म परिवर्तन गरेको स्वीकार गरे र उनीहरुलाई एक–एक वर्षको सजाय दिइयो । अरुलाई धर्म परिवर्तन गर्न लगाएको आरोपबाट भने उनीहरुले सफाइ पाए । पक्राउ परेका यी नौ जना ख्रिष्टियन नेता मध्ये एकजना अहिले माओवादी पार्टी भित्र भएको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
र, तिनै जेलमा परेकाहरु बाट गाउँमा एउटा पानीबाट चल्ने स–मिल खोले । मिल दुई तले थियो । मिलको चोटामा ख्रिष्टियनहरु भेला हुने भजन हुने गर्दै गरेको खबर पाएपछि २०४० सालमा उक्त मिल बन्द गराउन भनेर प्रहरी गाउँ पसे । प्रहरी गाउँ पुग्दा गाउँलेले प्रहरीलाई समाएर जुँगा उखेल्ने, कालोमोसो दल्ने बर्दी च्यातेर पिटपाट गरेर गाउँ घुमाए । र, यसै घटनालाई प्रतिबेदनमा ख्रिष्टियन बिद्रोह भनेर ‘USD’ ले उल्लेख गरेको हो । यिनै ख्रिष्टियन बिद्रोह र माओवादी बिद्रोहको साँठगाँठबाट जन्मन पुग्यो दुल्लु बिद्रोह ।
म एकपटक सदरमुकाम भरतपुर गएको थिएँ । २०६१ सालतिर होला जिल्ला प्रशासन कार्यलय अगाडि तिर सात आठ वटा बसमा एउटा बिदेशी गैरसरकारी संस्थाले चितवन जिल्लाको दुर्गम पहाडी इलाकाबाट गाउँलेहरु ओसारेर ल्याएको रहेछ नागरिकता बनाउन । म अचम्म परें । कसरी ल्यायो होला माओवादी आधार इलाकाका मान्छेहरु सदरमुकाममा ? त्यो दुर्गम इलाकामा माओवादी बाहेकका कोही मान्छे छिर्नै सक्दैन थिए । तर, बिदेशी ख्रिष्टियन मिसनरीहरु भने खुलेयाम चर्च बनाउदै मान्छे भेला गर्दै हिंड्थे । बल्ल अहिले आएर बुझ्दै छु ‘कनेक्सन’ कसरी फिट हुने रहेछ भनेर ।
माओवादी ख्रिष्टियन ‘कनेक्सन’ सुरु भएपछि सुरु भयो नेपालमा संस्कृत पढाएको निहुँमा शिक्षकको हत्या हुने घटना देखि संस्कृत बिद्यालयमा बम विस्फोट सम्म । पुराण लगाएको ठाउँमा पण्डितको हत्या देखि बाहुनको घरमा गोरुको मासु पकाउन लगाएको घटना सम्म भए । हुँदाहुँदै गाउँमा काजकिरिया गर्न नदिने दसैं तिहार मान्न नदिने, घरमा राखेको जमरा उखेलेर फाल्ने, बाहुनको टुपी उखेल्ने सम्म गरे ।
अति भएपछि दैलेख जिल्लामा पहिलो पटक दुल्लु वासीले बिद्रोह गरे । त्यो बिद्रोह फैलिएर वरपरका १३ गाबिसमा फैलिएर नौ मुले सम्म पुग्यो । त्यहाँ पुगेको तत्कालीन माओवादी केन्द्रिय नेता खड्ग बहादुर बिश्वकर्मालाई मरणासन्न हुने गरि गाउँलेले कुटे । माओवादीले आफुहरुको विरुद्ध महिलाहरुलाई उचालेर विद्रोह गराएको भन्दै एमाले समर्थित खड्गबहादुर खड्कालाई माओवादी कार्यकर्ताले हत्यासमेत गरे । तर, बिद्रोह झन् फैलिँदै जान थालेपछि माओवादीको हेड्क्वाटर सम्म हलचल मच्चिन थाल्यो ।
त्यसपछि माओवादी पछाडी हट्यो ‘एक स्टेप डाउन’ रणनीति चाल्दै स्थानीय जनताको मन जित्न दुल्लु–पीपलघारी सडक खन्ने काम पनि गर्यो । केहि जिल्ला स्तर नेताको एक तह पदपनि घटुवा गरे । तत्कालीन जिल्ला एमाओवादी उपाध्यक्ष नयाराम थापा भन्छन्, ‘जनसत्ताको अति प्रयोगका कारण समस्या आयो । दसैं तिहार मनाउन नदिने, जमरा उखेल्ने, काजकिरिया गर्न नदिने, टुप्पी काटिदिने जस्ता काम भए । त्यसबाट जनआक्रोश बढ्यो ।’ कान्तिपुर फाल्गुन २५, २०७१
दसैं तिहार मान्न नदिनु, आमाबाबुको किरिया गर्न नदिनु, टुपी उखेल्नु, संस्कृत पाठशाला ध्वस्त पार्नु, यो कुनै तल्लो तहको कार्यकर्ताको निर्णय नै होइन । न यी परम्परा मौलिक संस्कृतिले माओवादी युद्धलाई छेकवार गर्नु नै थियो । यी सबै माथिल्लो कमान्डरको गोप्य आदेश तल्लो तहले पालना गरेको मात्रै थियो । किनकि माथिल्लो ओहदाको ‘कनेक्सन’ अन्तै भएपछि अन्तै बाट दिएको आदेशलाई माओवादीको खोल हालिएको मात्रै थियो ति गाई गोरु काटने देखि टुपी उखेल्ने हर्कत हरु सम्म ।
अमेरिकी गैरसरकारी संस्था USD ले तयार गरेको प्रतिबेदनमा माओवादी द्वन्द्वमा ख्रिष्टियन बिद्रोह सँग जोडिएको पात्र पनि छ भनेर ‘कनेक्सन’ भएको रिपोर्टिङ तयार पार्नु र भारतिय लेखक राजीव मल्होत्राको नेपालमा माओवादी इसाई सँठगाँठको खुलासा गरेको ब्रेकिङ इन्डिया नामक पुस्तकमा उदृत तथ्यले देखाउँछ । असली मुनको खसोखास नायक क. प्रचण्ड हुन । माधवकुमार नेपाल खड्ग ओली, शेर बहादुर देउवा, कृष्ण सिटौला, बिमलेन्द्र निधि त प्रचण्डले छोडेको टपरीमा उप्रे पाप्रेको जुठोपुरो सोर्ने मात्रै हुन् ।
अतः मुलुकमा फेरी सचेत नागरिकहरु बाट एक पटक दुल्लु बिद्रोह नजन्मे सम्म यहाँको धर्म, संस्कृति, सभ्यता माथि यस्तै छद्मभेषी हरु बाट चिथोर्ने काम निरन्तर रहनेमा कुनै शंका छैन ।
पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरीले दाइजो फिर्ता माग्दै रिट हालिन्
‘युद्धको आवाज चर्किँदै छ, जनताले फेरी दुःख पाउँदैछन्, जिस्किने विषय हो यो ?’
राष्ट्रवादी सरकारका एक वर्ष र सिके राउतसँग स्खलित प्रधानमन्त्री
राजा विरेन्द्रको हत्याः ‘र’ को योजना
विश्वकै कै अद्धितीय आयोजनाः कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई
सामाजिक सन्जालमा लिम्बुवान स्प्रिङका कुरा
अहिले सामाजिक सन्जालमा लिम्बुवान स्प्रिङ आन्दोलनको कुरा हुँदा कतिले यस आन्दोलनलाई फेसबुके आन्दोलन भनिरहेका छन् भने कतिले फिस्टाहरुले चलाएका आन्दोलन भनि रहेका छन् अनि कतिले सामाजिक सन्चालमा आन्दोलको रोमान्टीनिजम भनेर भनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मलाई केहि कुराहरु राख्... जारी राख्नुहोस...
सांसदको प्रश्नः हाम्रो देशमा ब्राह्मण, क्षेत्रीको मात्रै अधिकार छ ?
फागु... जारी राख्नुहोस...
लैंगिक समानता र स्वतन्त्रताको अभियानसँगै समानताको अर्थ पुरूषले बच्चा जन्माउनु पर्छ भन्ने हो र ?
काठमाडौं । मार्च ८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस । यस दिवसको आफ्नो गौरवशाली इतिहास छ । संसारभरिका महिलाहरूले गौरव गर्छन् यस दिवसप्रति । यस अवसरमा यस दिवसका मुख्य ब्यक्तित्व क्लारा जेटकिनलगायत संसारभरका संघर्षशील अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान प... जारी राख्नुहोस...
भगवती चौधरीका नजरमा भरतमोहनः दुरदर्शी, सफल अर्थमन्त्री
फागुन ३, काठमाडौं । राजनीति भन्ने पेशा अचम्मको हुन्छ । अझ नेपालको राजनीति झन् अचम्मको हुन्छ । यसले न गुण हेर्छ न त दोष । अझ अचम्म त के हुन्छ भने आफु माथि जान यसले आफन्त खोज्छ, कार्यकर्ता खोज्छ, भरपर्दो समूह खोज्छ तर माथि गइसके पछि आफुलाई सुरक्षित गर्न त्यही सिंढी बनाएकालाई सिध्या... जारी राख्नुहोस...